The Rohingya News Bank : ကုလ
Showing posts with label ကုလ. Show all posts
ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်ကို သတ်ဖြတ်မှု ကုလပြင်းထန်စွာ ရှုတ်ချ
01 အောက်တိုဘာ၊ 2021
ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်စခန်းတွင်းခေါင်းဆောင် Mohib Ullah
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ Cox’s Bazaar မှာ ရှိတဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းက ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင် Mohib Ullah အသတ် ခံရတာအတွက် ပြင်းထန်စွာရှုတ်ချကြောင်း ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှုးချုပ် Antonio Guterres ရဲ့ လက် ထာက်ပြောခွင့်ရ Stephanie Tremblay က ကြာသပတေးနေ့မှာ ပြောပါတယ်။
“ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် Cox’s Bazaar ဒုက္ခသည်စခန်းက ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင် Mohib Ullah ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က အသတ် ခံရတာအတွက် ကုလသမဂ္ဂက ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှုတ်ချပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အာဏာပိုင်တွေ အနေနဲ့ ဒီ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ လုပ် ဖို့ရော ကျူးလွန်သူကို အပစ်ပေးနိုင်အောင် လုပ်ဖို့ရော ကုလ သမဂ္ဂက တိုက်တွန်းပါတယ်။” လို့ ပြောသွားတာပါ။
Labels: 2021, mm, ကုလ, ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်, ရှုတ်ချ, သတင်း, သတ်ဖြတ်မှု
15 စက်တင်ဘာ၊ 2021
ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာ သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်း နေရာကို စစ်ကောင်စီဘက်က အစားထိုးခန့်အပ်လို တဲ့ ကိစ္စ အပါအ၀င် ကုလသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုတွေကို ဖြေရှင်းမယ့် ၇၆ ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံကို အင်္ဂါနေ့မှာ စတင်ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ ဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်နေရာ တွေကို အဆုံးအဖြတ်ပေးမယ့် Credentials ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်း အင်္ဂါနေ့မှာဘဲ ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။ မသိင်္ဂီထိုက် စုစည်းတင်ပြပေးမှာပါ။
Labels: 2021, Credentials Committee, mm, ကုလ, သတင်းး
ရိုဟင်ဂျာတွေအတွက် ၂၀၂၀ ဟာ အဆိုးဆုံးရေကြောင်း ခရီးသွားနှစ်အဖြစ် ကုလမှတ်တမ်းတင်
Bangladeshi villagers help two elderly Rohingya women fromaboat after crossingacanal at Shah Porir Deep, in Teknak, Bangladesh, Aug. 31, 2017.
အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးတွေ အများစု အပါအဝင် ရေကြောင်းကနေ ထွက်ပြေးကြတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်တွေအ တွက် ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဟာ အဆိုးဆုံးနှစ်တနှစ် ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂက ပြောလိုက်ပါတယ်။
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ ကပ္ပလီပင်လယ်တွေကို ဖြတ်သန်းပြီး ရေကြောင်းခရီး သွားခဲ့ကြသူတွေအတွက် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ဟာ အသေအပျောက်အများဆုံးအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ကြောင်း ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ ကုလသ မဂ္ဂ မဟာမင်းကြီးရုံး (UNHCR) ရဲ့ ကြာသပတေးနေ့ ထုတ်ပြန်တဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြလိုက်တာပါ။
Labels: 2021, Boat People, mm, ကုလ, ရိုဟင်ဂျာ, သတင်း
ရိုဟင်ဂျာနဲ့ လူနည်းစုတွေအပေါ်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ဖိနှိပ် တိုက် ခိုက်မှုတွေဟာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ရာကျ ကြောင်း ကုလ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီမှာ သဘောတူ
13 ဇူလိုင် 2021
ရိုဟင်ဂျာနဲ့ တခြားလူနည်းစု လူမျိုးစုတွေအပေါ် မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ ဖိနှိပ်တိုက်ခိုက်နေမှုတွေဟာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ရာကျကြောင်း ပြစ်တင်ဝေဖန်ထားတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းကို ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကောင် စီက အတည်ပြုလိုက်ပြီး ရင်ကြားစေ့ရေးနည်းလမ်းနဲ့ အဖြေရှာဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
Labels: 2021, mm, ကုလ, ရိုဟင်ဂျာ, လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ, လူနည်းစု, သတင်း
မြန်မာ့အရေး ကုလပျက်ကွက်မှု ရာဇဝတ်မှုမှာ အလိုပါဖြစ် နေ (Christopher Gunness)
မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်း ဖြေရှင်းနိုင်ရေးမှာ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ကြီးရဲ့ တာဝန်ပျက်ကွက်မှုတွေက ရာဇဝတ် မှုတွေမှာ အလိုတူ အလိုပါ သဘောမျိုး ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီး ဗြိတိန် အခြေစိုက် NGO အဖွဲ့တခုဖြစ်တဲ့ Myanmar Accountability Project အဖွဲ့က Christopher Gunness က ပြောပါတယ်။ မအိသန့်စင် ဆက်သွယ်မေးမြန်း ထားပါတယ်။
Labels: 2021, Christopher Gunness, mm, Video, ကုလ, မြန်မာ့အရေး,ှQ & A
မြန်မာ့အရေး လူ့အခွင့်အရေးကေုလကာင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက် ကန့်ကွက်သူမရှိအတည်ပြု
မတ်လ ၃ ရက်နေ့က မန္တလေးမြို့ရှိ လမ်းမပေါ်တွင် တွေ့ရတဲ့ မြင်ကွင်း။ (မတ် ၃၊ ၂၀၂၁)
မြန်မာနိ်ုင်ငံမှာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့က စစ်တပ်ကနေ မြန်မာအရပ်သားအစိုးရကိုဖြုတ်ချတဲ့အပေါ် အပြင်း အထန်ရှုတ်ချထားတဲ့ ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းကို ကန့်ကွက်သူမရှိ၊ မဲမခွဲဘဲ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီကနေ တညီတည်း ဆုံးဖြတ်အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ အစည်း အဝေး စောင့်ကြည့်သတင်းယူနေတဲ့ မနန်းလောဝ်ပြောပြမှာပါ။
Labels: 2021, mm, ကုလ, မြန်မာ့အရေး, လူ့အခွင့်အရေးကေုလကာင်စီ, သတင်း
သတင်းထဲကသုတ အစီအစဉ်အဖြစ် ဒီတပတ် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအကြောင်း ပြောပြထားပါတယ်။ နိုင်ငံတကာကသတင်းတွေ ကြည့်ရှုနားဆင်ကြတဲ့အခါ အဲဒီသတင်းတွေထဲမှာ ပါတဲ့ ထူးခြားတဲ့အကြောင်း အ ရာ အချက်အလက်တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဗဟုသုတရစေဖို့ မညိုညိုလွင်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
Labels: 2021, mm, UNSC, Video, ကုလ, လုံခြုံရေးကောင်စီ
ရခိုင်ပြဿနာပြေလည်ရေး အာဆီယံ နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ရန် ကုလအဆင်သင်
အာဆီယံ- ကုလသမဂ္ဂ ၀န်ကြီးများအစည်းအဝေးကို ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်က အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက် နေ့စွဲနဲ့ သ၀ဏ်လွှာတစောင်ပေးပို့လိုက်ပါတယ်။
အဲဒီသ၀ဏ်လွှာထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ် နဲ့ တခြားနေရာတချိုက ရိုဟင်ဂျာ နဲ့ တခြားလူမှု အသိုင်းအ ၀ိုင်းတွေ အိုးအိမ်စွန့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရဆဲ ဆိုးရွားတဲ့ ဒုက္ခတွေရင်ဆိုင်နေရဆဲ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ပြဿနာရဲ့ ကြောင်းရင်းဇစ်မြစ်ကို ဖြေရှင်းဖို့ အပူတပြင်းလိုအပ်နေတယ် လို့ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် ကဆိုပါတယ်။ ဒုက္ခသည်တွေ လုံလုံခြုံခြုံ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ သူတို့ဆန္ဒအလျောက် ပြန်သွားနိုင်မယ့် အခြေအေ နတွေ ဖန်တီးပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ လဲဆိုပါတယ်။
Labels: 2020, Antonio Guterres, mm, ကုလ, ရခိုင်ပြဿနာ, သတင်း, အာဆီယံ
ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရိုဟင်ဂျာများ ပါဝင်ခွင့်ရစေရန် ကုလ တောင်းဆို
စက်တင်ဘာ ၁၃၊ ၂၀၂၀
Rohingya Muslim children and elders gather at the Thet Kel Pyin camp in Rakhine state. Photo: Phyo Hein Kyaw/AFP
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျင်းပမည့် ၂၀၂၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ၌ ရိုဟင်ဂျာများ (မူရင်း) ပါဝင်ခွင့်ရစေရန် ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ အဖွဲ့ဝင် ရှစ်နိုင်ငံက တောင်းဆိုလိုက်သည်။
တံခါးပိတ် ဗီဒီယို ဆွေးနွေးပွဲအပြီးတွင် ယခုကဲ့သို့ တောင်းဆိုကြောင်း စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်ပြီး ဘယ်လ်ဂျီယံ၊ ဒိုမီနီကန် သမ္မတနိုင်ငံ၊ အက်စတိုးနီးယား၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီ၊ တူနီးရှား၊ ဗြိတိန်နှင့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတို့က ပါဝင် လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည်။
Labels: 2020, mm, UN, ကုလ, ရိုဟင်ဂျာ, သတင်း, တောင်းဆို
COVID-19 အန္တရာယ်ကာကွယ်ရန် နှာခေါင်းစည်းတပ်ပြီး စားစရာအလှူစောင့်နေသည့် ဆိုက်ကားဆရာတဦး။ (ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၇၊ ၂၀၂၀)
မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းမှာ COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ် တားဆီးရေးအတွက် ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ အကူအညီတွေ ပေးသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ ကုလသမဂ္ဂရုံးက ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ ဧပြီလ ၁၁ ရက် နေ့စွဲနဲ့ ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ ကြေညာချက်မှာတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ COVID-19 ရောဂါ မပြန့်ပွားရအောင် ကာကွယ်တားဆီးဖို့အတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂.၂ သန်းကျော် သုံးစွဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။
Labels: 2020, Covid-19, mm, ကုလ, ကူညီမည်, ရခိုင်ပြည်နယ်, သတင်း
ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ COVID-19 အန္တရာယ်ကာကွယ် ရေး ကုလပြင်ဆင်
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ Kutupalong ဒုက္ခသည်စခန်းရှိ ဈေးတခုတွင် စုဝေးနေကြတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်များ (မတ် ၂၄၊ ၂၀၂၀)
ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂမဟာမင်းကြီးရုံး UNHCR က အကူအညီပေးနေတဲ့ နိုင်ငံတကာက ဒုက္ခ သည်စခန်းတွေထဲမှာ COVID-19 ရောဂါ တားဆီးကာကွယ်ရေး လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ဒီကနေ့ ချမှတ် လိုက်ပြီး အဲဒီထဲမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
Labels: 2020, Covid-19, mm, ကုလ, ဒုက္ခသည်စခန်း, ဗွီအိုအေ, ရိဟင်ဂျာ, သတင်း, အန္တရာယ်
ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေ အတွက် ဒေါ်လာ သန်း ၉၀၀ ခန့် ကုလတောင်းခံ
05 မတ်၊ 2020
မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ - ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂမဟာမင်းကြီး Filippo Grandi ဘင်္ဂလားဒေရှ့်နိုင်ငံ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည် စခန်းကိုသွားရောက်။
မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနေ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေ အတွက် အကူ အညီ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈၇၇ သန်း လိုအပ်နေကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ အေဂျင်စီတွေနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရ တို့က မတ်လ ၃ ရက်နေ့မှာ တောင်းခံလိုက်ပါတယ်။
Labels: 2020, mm, Mr. Filippo Grandi, ကုလ, ဒုက္ခသည်, ရိုဟင်ဂျာ, သတင်း
ရိုဟင်ဂျာတွေနေရပ်ပြန်ရေး မြန်မာလုပ်ဆောင်မှု နှေးကွေး ကြောင်း ကုလပြော
ရိုဟင်ဂျာတွေနေရပ်ပြန်လာရေးအတွက် ဆောက်ထားသော စခန်းများ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရောက် သိန်းနဲ့ချီတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေ နေရပ်ပြန်ရေး မြန်မာနိုင်ငံ ဘက်က ကြိုး ပမ်း မှုတွေဟာ နှေးကွေးလွန်းတဲ့အကြောင်း ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ မဟာမင်းကြီးက ပြောဆိုလိုက် ပါတယ်။
ဒုက္ခသည်တွေ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကနေ မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်နိုင်မယ့် အခြေအနေတွေ ဖန်တီးတဲ့ နေရာမှာ နှေး ကွေး လွန်းတာ၊ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း ဖြစ်မလာသေးတဲ့အကြောင်း မဟာမင်းကြီး Filippo Grandi က အင်္ဂါနေ့မှာ ပြောဆိုလိုက်တာပါ။
Labels: 2020, mm, UNHCR, ကုလ, မြန်မာ, ရိုဟင်ဂျာ, သတင်း, နေရပ်ပြန်ရေး
ရခိုင်အရေး မည်သည့်နိုင်ငံတကာတရားရေးအဖွဲ့၏ ကြိုးပမ်းမှုကိုမှ မြန်မာလက်မခံ
ရခိုင်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြန်မာပြည်တွင်းမှာ ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ ရှိနေသေးလို့ ဘယ်နိုင်ငံ တကာတရားရေး (သို့မဟုတ်) ဥပဒေအဖွဲ့ရဲ့ ကြိုးပမ်းမှုကို မဆို လက်မခံကြောင်း မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စား လှယ် ဦးကျော်မိုးထွန်းက ပြောပါတယ်။
Labels: 2020, mm, ကုလ, မြန်မာ, ရခိုင်အရေး, လက်မခံ, လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ, သတင်း